Sun, Jul 12, 2020 at 9:37pm
गायिका अन्जु पन्तको नयाँ गीत सार्वजनिक (भिडियो)
नेपाली गायन जगतकी चर्चित गायिका अन्जु पन्तको नयाँ गीत भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । "तिम्रो यादले"बोल रहेको उक्त गीतमा संगीतकार विनोद पछाईले संगीत भरेका छन् भने अन्जु पन्तको सुमधुर स्वरलाई शब्द तथा लय रविन्द्र आशिष साइलीले दिएका छन् । गीत संगै गीतको ५ मिनेट ३८ सेकेन्डको म्युजिक भिडियो पनि रिलिज गरिएको छ । पति - पत्नीबीचको वियोगलाई मर्मस्पर्शी ढंगबाट देखाइएको..
प्रतिक्षित चलचित्र 'सुपर गोर्खे'का एक मूख्य पात्र 'भुपेन्द्र क्षेत्री'
काठमाडौं मंसिर १३ । प्रतिक्षित चलचित्र सुपर गोर्खे निर्माण गरेकी हुन् नायिका ऋचा सिंह ठकुरीले । उनले निर्माण गरेको तथा उनको पनि अभिनय रहेको चलचित्रको एक मुख्य पात्र हुन् भुपेन्द्र क्षेत्री । यहि मंसिर २९ गते मुलुकभर प्रर्दशन गर्ने तयारीका साथ प्रचारप्रसारमा जुटेको चलचित्र यूनिटले ज्योतिषको सल्लाह अनुसार नै माघमा रिलिज गर्ने तयारी गरेको चलचित्रका एक मूख्य पात्र भुपेन्द्र क्षेत्रीले जानकारी दिए..
महिलालाई थप्पड हानेको दृश्यमा ताली बजाउन सक्दिन : ऋचा शर्मा
काठमाडौं मंसिर १२ । नेपाली सिने जगतको चर्चित नायिका ऋचा शर्मा र चलचित्र छक्का पञ्जाका निर्माता तथा कलाकार समूहबीचको सवाल जवाफका कारण पछिल्लो समय सिने जगत तातिएको छ । नायिका शर्माले महिला हिंसालाइ हाँसोको रुपमा चलचित्रमा उडाइनु गलत भएको भन्दै केहि दिन अघि एकादेश फिल्म फेस्टिभलमा चलचित्रमा महिलाको भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । कार्यक्रममा चलचित्र छक्का पञ्जाको उदाहरण दिदै उनले..
साउथ अफ्रिकाकी डेमी 'मिस युनिभर्स-२०१७' को ताज पहिरिन सफल
काठमाडौं मंसिर ११ । ’मिस युनिभर्स २०१७’ को ताज साउथ अफ्रिकाकी सुन्दरीले जितेकी छिन् । विश्वभरका ९२ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै साउथ अफ्रिकाकी डेमी ले नेलपेटर्सले ताज पहिरेकी हुन् । यो ताज जितेसँगै डेमी–ले नेल–पिर्टस विश्वको ६६ औं ‘मिस युनिभर्स’ बन्न सफल भएकी छन् । २२ वर्षिय डेमिलेग अमेरिकामा बस्दै आएकी थिइन् भने उनी मोडलको रुपमा काम गर्दै आएकी थिइन् । ‘मिस युनिभर्स–२०१७’ को..
'जमाना नि के आयो'बाट लोकप्रिय सर्जक शाहस भट्ट चर्चा बटुल्न सफल (भिडियो सहित)
काठमाडौं मंसिर ११ । नेपाली लोकगीत संगीतको चर्चित गायक तथा कुशल सञ्चारकर्मी राजु बोहोराको स्वरमा सु–सजित नयाँ लोकदोहोरी म्यूजिक भिडियो हालसालै यूट्युव मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । हालसालै यूट्युव मार्फत सार्वजनिक गरिएको जमाना नी के आयो बोलको गीतको म्यूजिक भिडियोले यूट्युवमा चर्चा बटुल्दै गएको छ । संञ्चारमाध्यमको मार्फत पनि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको संवद्धन र संरक्षणमा लागि परेका चर्चित गायक बोहोराले दुइ दर्जन..
काठमाडौँ, ११ मंसिर : नेपाल आर्ट काउन्सिलको कक्ष कलाकारले आफूहरुले सिर्जना गरेको चित्र, मूर्ति तथा काष्ठकला जनसमक्ष ल्याउने प्रमुख थलोका रुपमा विकास हुँदै गइरहेको छ । कलाको उत्थान गर्ने उद्देश्यले विसं २०१९ मा नेपाल आर्ट काउन्सिलको स्थापना भएको हो । राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले स्थापनाको दिनमा कला परिषद्को संरक्षकको जिम्मेवारी तत्कालीन राजा महेन्द्रले लिएका थिए । कूल २८ हजार ४२३ वर्ग फिटमा फैलिएको कला..
चर्चित भारतीय कमेडियन कपिललाई हलिउड फिल्मको अफर
एजेन्सी मंसिर १० । भारतका चर्चित कमेडियन कपिल शर्मालाई हलिउड फिल्मको अफर आएको छ । कपिललाई बिग मामा वर्क्सको तर्फबाट हलिउड प्रोजेक्टबाट अफर आएको हो । योे एक सीरीज हुनेछ, जसको टाइटल ’कमेडी करी’ राखिएको छ । कपिललाई ब्याड मामाज नामको एक कम्पनीले यो अफर गरेको हो । फिल्ममा एक हलिउड र एक इन्डियन स्टार हुनेछन् । कपिलले पनि यो कुरा पुष्टि गरेका..
अष्ट्रेलियामा साम्राज्ञीको पहिरनको चर्चा, फिल्म हाउसफूल
काठमाडौं मंसिर १० । केहि समय अघि नेपालमा सर्वा्धिक रुचाईएको फिल्म ‘’ए मेरो हजुर २’’ ले अष्ट्रेलियामा दर्शकको बाक्लो साथ प्राप्त गरेको छ । फिल्मले त्यहाँ हाउसफुल दर्शकको साथ उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पनि पाएको बताइएको छ । फिल्मले गरेको रेड कार्पेटमा अभिनेत्री साम्रागी राज्यलक्ष्मी शाह रेड अनि हट पहिरनमा प्रस्तुत भएकी थिईन् । उनको त्यस पहिरनलाई लिएर स्वदेश तथा विदेशमा चर्चा चुलिएको छ..
‘मोह मोहके धागे..’ गायिका मोनाली ठाकुर काठमाडौँ आउने
मंसिर १०, काठमाडौँ । बलिउडका कलाकारहरुको गन्तव्य नेपाल बन्न थालेको छ । पछिल्लो समय ‘मोह मोहके धागे...’ गित गाएर चर्चामा रहेकी मोनाली ठाकुर नेपाल आउने भएकी छिन् । उनले राजधानीको डेजा भू क्लबमा प्रस्तुति दिने कार्यक्रम पनि रहेको छ । डिसेम्बर ९ तारिखमा हुने कार्यक्रमममा मोनाली ठाकुरका साथमा नायकद्धय सलोन बस्नेत र आमेष भण्डारीको पनि विशेष प्रस्तुति रहने बताईएको छ । ..
यूएईको आबुधाबीमा आज बृहत साँस्कृतिक साँझ हुदै
काठमाडौं, मंसिर ७। युएईको आबुधाबीमा नेपाल आइडलका प्रतिस्पर्धी सागर आले र सुजाता पाण्डेले आफ्नो प्रस्तुति दिने भएका छन् । नेपाल मगर संघ युएई शाखाले आबुधाबीमा आयोजना गरेको बृहत्त सांस्कृतिक साँझमा उनीहरुले आफ्नो प्रस्तुती दिन लागेका हुन् । शुक्रबार साँझ हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन कलाकार सुजाता पाण्डे गत बुधबार नै युएई पुगेकी छिन् भने सागर आले विहीबार युएई पुगेका हुन् । कार्यक्रम आबुधाबीको फल्कोनर..
साम्राज्ञी महङ्गी नायिकाको सूचीमा, आर्यनले दिए १० लाख पारिश्रमिक
काठमाडौं मंसिर ५ । पछिल्लो समय नेपाली सिने जगतमा हिट चलचित्र दिएर चर्चा कमाउन सफल भएकी नायिका हुन् साम्रज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह । एक पछि अर्काे गर्दै लगातार दुई हिट चलचित्र ‘ड्रिम्स’ र ‘ए मेरो हजुर २’ दिएकी नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह नेपालको मंहगी नायिका बनेक छिन् । अभिनेता आर्यन सिग्देलको निर्माण र अभिनय रहेको चलचित्र ‘कायरा’मा साम्राज्ञीले १० लाख पारिश्रमिक लिएको खबर बाहिरिएको..
काठमाडौं मंसिर ४ । नेपाली सिने जगतकी चर्चित नायिका केकी अधिकारीले आफू निर्मित तथा अभिनित चलचित्र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’को प्रदर्शन मिति घोषणा गरेकी छिन् । उनले, यो चलचित्र आउँदो बर्षको वैशाख १४ गते चलचित्र रिलिज हुने उल्लेख गरेकी छिन् । चलचित्र छायांकनको २२ औं दिनमा केकीले चलचित्रको प्रदर्शन मिति घोषणा गरेकी हुन् । चलचित्रको छायांकन हाल बाँकेको कोहलपुरमा भैरहेको छ । विशाल भण्डारीलाई लिएर..
चित्रमा सुतूरमुर्गको अण्डा
काठमाडौँ, ३ मंसिर । ‘स्पेक्ट्रम’ कला संस्था ले ‘कलाको यात्रा’ शीर्षकमा प्रदर्शनी शुरु गरेको छ । प्रदर्शनीमा १४ कलाकारका यथार्थ र अर्धमूर्त चित्र छन् । मुलुकमा पहिलो पटक सुतूरमुर्ग(अस्ट्रिच)को अण्डालाई विषयवस्तु बनाएर चित्र सिर्जना गरिएको छ । सुतूरमुर्गको उत्पादनका लागि चाहिने विशेष प्रकारको तापक्रम र हावापानीबारे पनि प्रदर्शनीमा जानकारी गराइएको छ । चित्रमा बुद्धको शान्त स्वरुप, मायादेवी मन्दिर, मानिसका विभिन्न अवस्था,..
काठमाडौँ, ३ मंसिर । वरिष्ठ कलाकार शशीविक्रम शाहलाई ‘स्पेक्ट्रम कला सम्मान’ दिइएको छ । लामो समयसम्म कला क्षेत्रमा क्रियाशील रही नेपाली मौलिक कलालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पु¥याउन योगदान गरेबापत शनिबार उनलाई ‘स्पेक्ट्रम’ कला संस्थाले सम्मान गरेको हो । सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले सामाजिक रुपान्तरण र सद्भाव कायम गर्नका लागि कला सशक्त माध्यम बन्न सक्ने बताउँदै कलाका माध्यमबाट देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय..
‘मिस इण्डिया’ मानुषी छिल्लर बनिन् यसवर्षको ‘विश्व सुन्दरी’ (फोटो फिचर)
काठमाडौं, मंसिर ३ । यस वर्षको ‘मिस वोर्ल्ड’ को उपाधी भारतकी मानुषी छिल्लरले जितेकी छिन् । शनिबार चीनको सान्यामा आयोजित ६७ औं मिस वोर्ल्डको फाइनलमा मिस इण्डिया समेत रहेकी २० वर्षीय हरियाणवी सुन्दरी मानुषीलाई अघिल्लो संस्करणकी विजेता स्टेफेन डेल भेलीले मिस वल्र्डको ताज पहिर्याएकी थिईन् । यससँगै मिस वल्र्डको उपाधी जित्ने मानुषी छैठौं मिस इण्डिया बनेकी छिन् । यसअघि सन् २००० मा अहिलेकी..
काठमाडौं कार्तिक ३० । चलचित्र ‘लिलिबिली’ मा नायक प्रदीप खड्काले नायिका प्रियंका कार्कीसँग स्किृन सेयर गर्ने भएका छन् । यस अघि लिलिबिलीको नायिकाको रुपमा रेविका गुरुङलाई लिइएको थियो । उनलाई रिप्लेस गर्दै नायिकाको रुपमा प्रियंकालाई लिइएसँगै नेपाली सिने जगतमा प्रदीप र प्रियंकाको जोडीलाई लिएर चर्चा परिचर्चा चल्न थालेको छ । अहिले उनीहरु हट केक बनेका छन् । कतिले प्रदीपको अगाडि प्रियंका फिट नहुने..
काठमाडौं,२८ कात्तिक। गायक, गीतकार तथा संगीतकार मानसराजको नयाँ गीत ‘भाईरल भैदियो’को म्यूजिक भिडियो हालसालै यूट्युव मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । गत बिहिबार मात्रै सार्वजनिक भएको ‘भाइरल भैदियो’ बोलको गीत युटुव ट्रेन्डिङ नम्वर दुईमा आउन सफल भएको छ । गीत लेखनमा चर्चा कमाइसकेका मानसराज ६ वर्षपछि पुनः गायन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । नेपाली चलचित्र रेसम फिलिलीमा ‘पारि त्यो डाँडामा घाम लाग्यो घमाइलो,..
काठमाडौं कार्तिक २६। नेपाली सिने जगतका चर्चित नायक आर्यन सिग्देलले आफ्नो होम प्रोडक्सनमा कायरा फिल्म बनाउँदै छन् । उक्त चलचित्रमा नायका आर्यनले पछिल्लो समयको चर्चित नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहसँग स्क्रिन सेयर गर्दै छन् । उनले ’आर्यन सिग्देल इन्टरटेन्मेन्ट’बाट निर्माण हुने फिल्ममा मात्र काम गर्ने बताएका आर्यनले नयाँ प्रोजेक्टमा नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहसँग जोडी बाँध्न लागेका हुन् । वर्किङ टाइटल ‘कायरा’ राखिएको फिल्ममा..
डेब्यू फिल्मबाटै दीपिकालाई सफलता, अभिनयको सर्वत्र चर्चा
काठमाडौं कार्तिक २३। नेपाली चलचित्रकी नव नायिका दीपिका प्रसाई यति वेला चर्चित छिन् । हालसालै प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ऐश्वर्यबाट उनले डेब्यू गरेकी हुन् । उनको ऐश्वर्य चलचित्रमा गरेको अभिनय कै कारण चर्चित बनेकी हुन् । उनको कलाको चौतर्फी प्रशंशा हुने गरेको पाइन्छ । ऐश्वर्यमा दमदार अभिनय देखाएकै कारण उनलाई विभिन्न ठूला ब्यानरहरुबाट पनि कामको अफर आइरहेका कुरा सार्वजनिक भएको छ । ऐश्वर्यमा उनले..
काठमाडौं कार्तिक २२ । नेपाली सिने जगतको नव नायिका अदिति बुढाथोकीको बलिउड उद्योगमा चर्चा चलेको छ । नेपाली चलचित्र कृ मार्फत नेपाली रजतपटमा आउन लागेकी नव नायिका अदितिको भारतीय सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशन गरेको हो । बेलाबखतमा नेपाली कलाकारहरुको विषयमा भारतीय मिडियाले पनि चासोका साथ समाचार छाप्ने गरेका छन् । अर्चना पनेरु, ज्योती मगर, अनमोल केसी, राजेश हमाल लगायतका नेपाली कलाकारको विषयमा भारतीय..
बिपिन बने महङगा कलाकार, एउटै फिल्मबाट लिए १७ लाख बढी पारिश्रमिक
काठमाडौं कार्तिक २२ । पछिल्लो समय नेपाली सिने जगतमा राम्रो काम गर्ने अनि टिक्ने कलाकारहरुले पारिश्रमिक पनि राम्रै लिन थालेका छन् । यस हिसाबले पनि कलाकारहरुले फिल्म खेलैरै जीवन धान्न सक्ने आधार नेपाली सिने जगतमा बन्न थोलेको पाइन्छ । केहि समय अघि युवा स्टार अनमोल केसीले २० लाख पारिश्रमिक लिएको खबरले नेपाली सिने नगरी तताएको थियो । अहिले पुनः पशुपतिप्रसाद फिल्मका ‘भस्मे डन’..
काठमाडौं कार्तिक १९ । बलिउडकी चर्चित तथा सुन्दरी नायिका दीपिका पादुकोणको चर्चा अहिले बलिउडमा मात्रै नभएर हलिउडमा समेत रहेको छ । शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ‘ओम शान्ति ओम’ बाट बलिउडमा डेब्यू गरेकी नायिका दीपिकाले हलिउडमा पनि आफ्नो राम्रो पहिचान बनाइसकेकी छिन् । यही वर्ष उनी अभिनित पहिलो हलिउड फिल्म ‘ट्रिपल एक्स : रिटर्न अफ जेन्डर केज’ रिलिज भएको थियो । जसमा उनको..
काठमाडौं कार्तिक १६। केहि समय अघि सामाजिक सञ्जालमा तरकारीवालीको रुपमा भाइरल बनेकी गोरखाकी कुसुम श्रेष्ठ चलचित्र लम्फु मार्फत नेपाली सिने जगतमा छाउने कोसिसमा छिन् । गोरखाको भुम्लीचोककी कुसुमले डोकामा तरकारी बोकेर खोला तर्दै गरेको फोटो पर्यटन व्यवसायी रूपचन्द्र महर्जनले सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेसँगै ‘तरकारीवाली’ को रुपमा उनको नामले चर्चा चुम्यो । उनको चर्चा कुनै कलाकारको भन्दा कम भएन । उनलाई त्यति खेर..
काठमाडौं, १५ कार्तिक । केकी अधिकारी नेपाली सिने जतगको एक चर्चित नाम हो । नायिका अधिकारीले दर्जनौ चलचित्रमा आफ्नो अभिनय कौशल देखाइसकेकी छिन् । म्यूजिक भिडियोबाट कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी यी सुन्दरी नायिकाले सिने जतगमा चलचित्र ‘स्वर’बाट डेब्यू गरेकी हुन् । उनको प्राय चलचित्रले खासै व्यापार नगरे पनि उनको अभिनयको भने सबैले खुलेर प्रशंसा गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसो त अभिनयमा मात्रै..
मंगलवार, कार्तिक १४, २०७४ साल
काठमाडौं कार्तिक १४। नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित नायिका नीता ढुंगाना सान फ्रान्सिस्कोमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित भएकी छिन् । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सान फ्रान्सिस्को सहरमा आयोजित “सान फ्रान्सिस्को चलचित्र महोत्सव” मा नीता अभिनित फिल्म ‘पञ्चायत’ले विदेशी भाषाको ’उत्कृष्ट फिल्म’ विधामा र ’उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री’ विधामा पुरस्कार जित्न सफल भएको हो । नेपालमा राष्ट्रिय पुरस्कार समेत प्राप्त गर्न सफल नायिका नीता ढुंगानाले अन्तिराष्ट्रिय पुरस्कार..
‘ऐश्वर्य’ को फिल्म युनिटले थाल्यो पोखराबाट मोफसल टुर
काठमाडौं, असोज ३० । आगामी कार्तिक ९ गतेबाट देशव्यापीरुपमा प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘ऐश्वर्य’ को फिल्म युनिटले मोफसल टुरको सुरुवात पोखराबाट गरेको छ । सिनेमाको प्रचार गर्नुका साथै मोफसलका सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने लक्ष्यसहित टुरको आयोजना गरिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ । यस चलचित्रलाई नायक रमेश उप्रेतीले निर्माण गरेका हुन् । आइतबार कास्की चलचित्र पत्रकार संघको आयोजनामा पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमा..
‘बाहुबली’ को उच्च छविलाई सधैंभरी कायम राख्न चाहन्छन् प्रभास
एजेन्सीहरु । एसएस राजामौलीको सिनेमा ‘बाहुबली’ ले विश्वभर तहल्का मच्चाएपछि राता–रात प्रसिद्ध बनेका दक्षिण भारतीय अभिनेता प्रभासको कुरा गरौं ! अहिले भारतमा तीन खानभन्दा पनि ठूला स्टारका रुपमा हेर्न थालिएका प्रभासको ‘फ्यान फलोइङ’ समेत ब्यापक बन्दै गएको छ । ‘बाहुबली’ को फ्रेन्चाइजीमार्फत दुनियाँभरमा चर्चित भएका अभिनेता प्रभासले हालैमात्र आफूले ‘बाहुबली’ का दुई संस्करणबाट बनाएको छवि तोड्न नचाहेको बताएका हुन् । एक भारतीय मिडियालाई..
नयाँ दिल्ली, असोज । यतिबेला सु–प्रसिद्ध गायक उदीत नारायण झाका छोरा आदित्य नारायण झा निकै चर्चामा छन् । सधैं हँसिलो मुद्रामा टेलिभिजन शो सञ्चालन गर्ने आदित्य झगडामै उत्रिएको भिडियो इन्टरनेटमा भाइरल बनेपछि आदित्य चर्चाको विषय बनेका हुन् । आदित्यले निर्धारित तौलभन्दा बढी तौलको लगेज बोकेको भन्दै एयरपोर्ट अधिकारीहरुले सोधपुछ गरेपछि आदित्य आक्रोशित भएका हुन् । उक्त भिडियो भारतको रायपुर एयरपोर्टमा खिचिएको हो ।..
मुम्बई (एजेन्सी) । छिमेकी देश भारतमा आजकल तामिल भाषामा महङ्गो बजेटमा सिनेमा बनाउने एक किसिमको प्रतिस्पर्धा नै चलेको पाइन्छ । त्यसैले त ठूला–ठूला बजेटमा बन्ने यस्ता सिनेमामा कसले अभिनय गर्छ भन्ने कुराले पनि उत्तिकै चर्चा पाउने गर्छ । यस्तै ठूलो बजेटमा निर्माण हुँदै गरेको तामिल सिनेमा मध्ये एक हो – ‘संघमित्रा’ । केही समय अघि तामिल ऐतिहासिक फिल्म ‘संघमित्रा’का लागि कमल हसनकी..
७ असोज, काठमाडौं । अत्यधिक बहुमतका साथ राप्रपाको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएको १ वर्ष पनि नवित्दै गायिका कोमल वली एमालेमा प्रवेश गर्ने चर्चा चल्न थालेको छ । कोमल आगामी सोमबार अध्यक्ष केपी ओलीका हातबाट टीका लगाएर एमालेमा प्रवेश गर्न लागेको बताइएको छ । राप्रपा विभाजनपछि निराश बनेकी कोमलले केही दिन यता एमालेका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल अघि बढाएकी हुन् । कोमलले विशेष गरी..
Results 914: You are at page 30 of 31